Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး ဦးဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့သူ ကိုထင်ကျော်အား စွဲဆိုထားသည့် ပုဒ်မကို ပြောင်းလဲစွဲဆို
ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး ဦးဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့သူ ကိုထင်ကျော်အား စွဲဆိုထားသည့် ပုဒ်မကို ပြောင်းလဲစွဲဆို
ဖနိဒါ အင်္ဂါနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 07 2008 20:15 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး ဦးဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့သူ ကိုထင်ကျော်အား စွဲဆိုထားသည့် ပုဒ်မကို အာဏာပိုင်များက ယခုလဆန်းပိုင်းတွင် ပြောင်းလဲစွဲဆိုလိုက်သည်။
ယမန်နှစ် သြဂုတ်လက လောင်စာဆီဈေးကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြပွဲများ ကျင်းပရန် လှုံ့ဆော်ခဲ့သူ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လိုလားသူများအဖွဲ့မှ ကိုထင်ကျော်အား ယခုလ ၂ ရက်နေ့က ရုံးထုတ်ရာတွင် နိုင်ငံတော် လုံခြုံမှုကို ထိခိုက်ရန် လှုံ့ဆော်မှု ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ဖြင့် ပြောင်းလဲစွဲဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
"တရားသူကြီးက အမိန့်က ချတယ်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် မောင်ဦးရဲ့ အမိန့်နဲ့ ချထားတယ်။ သူ့ကို စွဲထားတဲ့ ပုဒ်မတွေကို ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ ၅၀၅(ခ)အမှုကို ပြောင်းလဲ လိုက်တယ်ဆိုတာ စာကို ဖတ်ပြတယ်" ဟု မနေ့က ထောင်ဝင်စာသွားခဲ့သည့် ကိုထင်ကျော်၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဖြစ်သူ ကိုသိန်းအောင်မြင့်က ပြောသည်။
ယခင်က မြို့နယ် ၃ ခုတွင် တမှုစီ စွဲဆိုထားသော နိုင်ငံတော်ကို အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄ (က) တို့်ကို နိုင်ငံတော် လုံခြုံမှုကို ထိခိုက်ရန် လှုံ့ဆော်မှု ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) သို့ ပြောင်းလဲကြောင်း တရားသူကြီးများမှ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးပေးပို့ခဲ့သည့် အမိန့်စာကို ဖတ်ပြခဲ့သည်။
ကိုထင်ကျော်သည် ရုံးထုတ်လာစဉ် တရားရုံးတော်သို့ မတက်ရောက်ဟု ငြင်းဆန်သော်လည်း ထောင်အာဏာပိုင်များမှ အတင်းခေါ်ထုတ်လာရာတွင် တရားသူကြီးအား လေးစားသောအားဖြင့် အမိန့်စာကို နားထောင်ခဲ့သည်ဟု ကိုသိန်းအောင်မြင့်က ပြောသည်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့က ကမာရွတ်မြို့နယ် လှည်းတန်းလမ်းဆုံ၌ ဘုန်းကြီးဝတ်ခွင့် ဆန္ဒပြမှု၊ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့က သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြဈေးတွင် ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြမှု၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန် သိမ်ကြီးဈေးတွင် ဆန္ဒပြမှု စသည့် အမှုတမှုစီအတွက် အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄ (က) ဖြင့် သူ့အား တရားစွဲဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အမှုများကို အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးက တာဝန်ယူ စစ်ဆေးနေရာ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် ဆန္ဒပြမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တမှုကိုသာ စစ်ဆေးပြီးခဲ့သေးကြောင်း ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းက ဆိုသည်။
ကိုထင်ကျော်က ယနေ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးသည် တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မရှိဘဲနှင့် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး၏ လက်အောက်တွင်သာ ရှိနေသည်မှာ သိသာထင်ရှားကြောင်းနှင့် သူ့အနေဖြင့် တရားရုံးအား ကန့်ကွက်ရခြင်းသည် တကမ္ဘာလုံးသို့ သိစေရန် သက်သေပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရုံးတော်သို့ ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ထို့အပြင် သူက လိုက်ပါဆောက်ရွက်နေသည့် ရှေ့နေနှင့် တွေ့ခွင့်ပေးရန်၊ သူ့အား ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် အထူးရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့နှင့် တွေ့ခွင့်ပေးရန်၊ မိသားစုဝင်များနှင့် တွေ့ခွင့်ပေးရန်နှင့် သူ့ကို တရားစွဲဆိုမည်ဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်သည့်အတွက် သူ့အား အာဆီယံတွင် ချမှတ်ထားသည့် ဥပဒေအတိုင်း ဆောက်ရွက်ပေးရန်တို့ တောင်းဆိုခဲ့သည်။
သူ၏ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းက ဒဒအန်ကယ်တို့ မသိရတော့ဘူး။ ပြည်ထဲရေးက ၁၂၄ ကို ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုတော့ အမှုကတော့ ပြတ်သွားတာပဲ။ အန်ကယ်နဲ့ အဆက်ပြတ်သွားပြီဆိုတော့ ဘာမှ မသိတော့ဘူး။ စက်တင်ဘာလ ပထမပတ်ကနေ ရုံးထုတ်တာ၊ ၀င်လို့မရတော့ဘူး" ဟု ပြောသည်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရက လောင်စာဆီဈေးနှုန်း အဆမတန် တိုးမြှင့်သည့်အပေါ် ဈေးနှုန်းပြန်ချပေးရန် သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်တွင် အများပြည်သူက တောင်းဆိုဆန္ဒပြရန် ကိုထင်ကျော်က တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပြီး သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် သူကိုယ်တိုင်လည်း ရန်ကုန် သိမ်ကြီးဈေးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြသဖြင့် အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
သူက အင်းစိန်ထောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် သံဃာတော်များ၊ ကျောင်းသားများနှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ထောင်တွင်း၌ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခဲ့သလို အကျဉ်းထောင်အတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လမ်းလျှောက်ခွင့် ရရေးအတွက်လည်း ဆန္ဒပြရာ၌ တတိယအကြိမ်တွင် တိုက်ပိတ်ခံခဲ့သည်။
ထို့အပြင် မိသားစုဝင်နှင့် ရှေ့နေများနှင့် တွေ့ခွင့် မရသလို၊ မည်သည့်နေ့တွင် ထပ်မံ ရုံးချိန်းသည်ကိုပင် မသိရှိရပေ။http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/1790-2008-10-07-13-58-18.html
Posted by Peaceful Walking at 1:27 AM
လေဘေးသင့် မိဘမဲ့ ကလေးများနဲ့ မှီခိုရာမဲ့ အမျိုးသမီ...
ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆၅)လ ပြည့်် ၀မ်းနည်းခြင်...
သမ္မတလောင်းမဲဆွယ်ပွဲ အိုဘားမားနဲ့ ဘီလ်ကလင်တန် ပူးပေ...
NLD လူငယ် အကျိုးဆောင် ရှေ့နေ အဖမ်းခံရ
ရွှေဂုံတိုင်အနီး ဓားပြမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်
၈၈ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များကို ထောင် ၆ လ ချမှတ်
စစ်မှုထမ်းဟောင်းများသာ ဦးပိုင်တက္ကစီကားများ မောင်းန...
ရန်ကုန်ရှိ ထောက်လှမ်းရေးပိုင် တိုက်ခန်းများ လေလံတင...
“စစ်အာဏာရှင် ကြီးစိုးမှုမှောင်ရိပ်” အစီရင်ခံစာ အမျိ...
အမေရိကန်ရဲ့ မြန်မာကျောက်မျက်ပိတ်ဆို့မှု ယခင်ဒဏ်ခတ်မ...
မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြောက်ကိုရီးယားကို ၂၅ ...
Burmese Artist Wathone's His works and His Funeral...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ရှေ့ကားလမ်း အတားအဆီးများ ဖယ...
NLD ပါတီ ပိုမိုအားကောင်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပ...
အရပ်သား အစိုးရအတွက် စစ်အစိုးရဘက်က ပြင်ဆင်မှုမရှိဟု ...
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး မအောင်မြင်ခြင်းသည် သံဃမဟာနာယ...
လက်ရှိ ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာကို အလန် ဂရင်းစ်ပန်က ဆူနာမီနဲ့တင...
US and the European Parliament call for Daw Aung S...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်အေ...
ဒေါ်အေးအေးဝင်းကို ရဲရင့်သော သတင်းသမားဆု ပေးအပ်
သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရရေး တိုက်ပွဲတွင် ဒီမိုကရေစီနိုင်...
သြစတေးသျှနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ငွေကြေးအရ အရေ...
လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့နေ ဦးအေးမြင့်အတွက် လူဒိုဗစ်တာရီ...
ရွှေပြည်သာမှာ ဗုံးကွဲ၊ လူတဦးသေဆုံး
လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် နိုင်ငံတကာနှင့် မြန်မာ့အရေးက...
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် နုတ်ထွက်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြ...
ဆိုမာလီတွင် ပြန်ပေးဆွဲခံရသည့် မြန်မာသင်္ဘောသားများ လ...
ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်းဒဏ် တရုတ်အလုပ်သမားတွေ ခံရပြီ
အန်အယ်လ်ဒီ လူငယ် (၁၀၀) နီးပါး နုတ်ထွက်
Generation Wave ( မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး )...
ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ပြေလည်ရေး ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ဆ...
ကားပေါက်ကွဲမှုဖြစ် လူ ၇ ဦးသေဆုံး၊ တဦး အပြင်းအထန် ဒဏ...
လုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့ရန်ကုန်မြို့
သီတင်းကျွတ် လပြည့် ( အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့ )
မိမိအီးမေးသို့ရောက်လာသော မရင်းနှီး၊ မသေချာသည့် အင်...
မြောက်ကိုရီးယားကို အကြမ်းဖက်ဝါဒ နာမည်ပျက်စာရင်းက ဖ...
ဒေါ်စု နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အယူခံ လျှောက်လဲချက် ပေးခွင်...
Generation Wave အထူးကျေညာချက်
Burmese junta steps up internet blockade
2008 နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်
နို့မှုံ့တံဆိပ် ၁၆ မျိုးကို စစ်ဆေးခဲ့ရာ တံဆိပ် ၉ မျ...
မြန်မာစစ်အစိုးရ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည့် မြန်မာနိုင်င...
အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး စာရွက် (၁) သိန်းကျော် ရန်ကုန်န...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံ အင...
UN chief may drop plans for Burma visit
အန်အယ်လ်ဒီအယ်လ်အေ အထူးအစည်းအဝေးပြီး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနေ...
ဆိုင်တွင် အင်တာနက်သုံးသူများ လုံခြုံမှုမရှိ
လျို့ဝှက်- နအဖ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၏ မိန့်ခွန်း ကောက်န...
တပ်သားတဦး အထက်အရာရှိကို သတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ...
ရက်စက်ကြတဲ့ နအဖရဲ့ လုပ်ရပ်မှန်
ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး ဦးဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့သူ ကိုထင်ေ...
၀င်သက်ထွက်သက်များ … အမြဲ ငါကြည့်နေတယ် … ရန်ကုန်
ရုံးထုတ်ရာတွင် မိသားစုဝင်များ ကြားနာခွင့်မရ၍ ၈၈ ကေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မျက်စိအထူးကုဆရာဝန် ၀င်ရောက်ြ...
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ ကျန်းမာရေး ဆိုးဝါးကြောင်း သတင်း...
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး သံဃာတပါး ရဲဘက်စခန်းက ထွက်ြေ...
ပျောက်ဆုံးနေသည့် မကွေးတိုင်း အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်တာဝန်ခ...